Global Voices teny Malagasy » Rosia : Ahariharin’Ireo Mpikatroka Mafana Fo Amin’ny Aterineto Ny Fiainan’Ilay Lehiben’ny Fonja Manone Baiko Hampijaly Ireo Voafonja · Global Voices teny Malagasy » Print
Rosia : Ahariharin'Ireo Mpikatroka Mafana Fo Amin'ny Aterineto Ny Fiainan'Ilay Lehiben'ny Fonja Manone Baiko Hampijaly Ireo Voafonja
Voadika ny 02 Novambra 2016 1:39 GMT 1	 · Mpanoratra Aric Toler Nandika Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Fanoherana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Vaovao Mafana, Akon'ny RuNet, GV Mpisolovava
Sary nalaina tao Shlissel'burg, faritr'i Leningrad. Flickr: CC 2.0
Nanao tatitra ilay mpanao politika mafana fo Ildar Dadin migadra any amin'ny Toby faha-7 Famaizana any amin'ny tanàna avaratr'i Segezha , tamin'ny herinandro voalohany amin'ity Novambra ity, fa niharan'ny fampijaliana sy habibiana tany am-ponja
Dadin, izay voasazy telo taona nanomboka tamin'ny Desambra teo araka ny lalàna vaovao iray izay manameloka “ny famerenana ny fanitsakitsahana ny fitsipiky ny fivoriam-bahoaka”  araka ny didy an-tsoratra nalefa tany amin'ny mpisolovava azy sy ny vadiny. Tamin'ny 1 Novambra 2016, nozarain'ny haba-tranonkalam-baovao Rosiana tsy miankina, Meduza, ilay taratasy .
Ilay taratasy mivantambantana sady mety hahatohina ireo mpamaky sasany, dia mitantara ny fampijaliana fanao mahazatra sy ny fanararaotana atao amin'ny voafonja eo ambany fitarihan'ny lehiben'ny fonja, ny Major Sergey Kossiev. Nandritra ny herinandrony voalohany tao amin'ny Toby faha-7 Famaizana (tao amin'ny toerana nametrahana ilay mpandraharaha ara-tsolika ngezalahy Mikhail Khodorkovsky ihany koa), dia tantarain'i Dadin fa olona am-polony no indray nikapoka azy, nahantona amin'ny tànana mifatotra amin'ny rojo vy nandritra ny antsasakadiny, rahonana amin'ny herisetra ara-nofo, sy nolazaina fa ho vonoina raha toa ka mitaraina amin'ny any ivelany ny toedraharaha iainany.
Efa nahazatra ireo izay namaky ny haisoratra fitsipiky ny GULAG tamin'ny faha-sovietika ity fitondra ny voafonja ity – isan'izany ireo mahazatra toy ny tangoronosy GULAG an'i Aleksandr Solzhenitsyn, ny tantaran'ny Kolyma an'i Varlam Shalamov, ary ny Misosa ny Zava-drehetra an'i  Vasily Grossman, mampiseho amin'ny antsipirihiny ny fiainana ao amin'ny tobin'ny voafonja sovietika ny ankamaroan'izy ireny. Raha toa ny samizdat ( gazety tsy ara-dalàna vita printy sy aparitaka ) no nianteheran'ireo mponin'i URSS liana tamin'io resaka io mba hamakiana ireny tantara ireny, dia ny haino aman-jery sosialy kosa no nampiasain'ireo Rosiana mafana fo mba hizaràna ny vaovao tahaka ireny.
Raisin'ny sasany an-tànana tamin'ny fampiasàna ny teknolojia mihitsy ny raharaha. Lasibatr’ ilay Rosiana mpanao politika mafana fo, Vladislav Zdolnikov,, izay miara-miasa amin'ny vondron'ny mpanohitra, ny Antoko Fivoarana, sy ny fahitalavitra mpanohitra Newscaster.TV, ny lehiben'ny fonja izy tenany tamin'ny alàlan'ny haino aman-jery sosialy.
Hatramin'ny namoahana ny taratasin'i Dadin, dia nobitsihin'i Zdolnikov ny fampahafantarana momba an'i Major Kossiev , izay lazain'i Dadin fa mpiray tsikombakomba tamin'ny fampijaliana azy. Notarihiny ihany koa ny hafa ho any amin'ny pejy Vkontakte -n'i Kossiev :
Кажется, настоящая страничка начальника ИК-7 https://t.co/LxEOdQBP1k 
Давайте расскажем ублюдку, что с ним случится после смены власти
— Vladislav (@unkn0wnerror) November 1, 2016 
Ity no tena pejin'ny haino aman-jery sosialin'ny lehiben'ny toby faha-7. ‘Ndao ho lazaina amin'ilay tsy vanona ity ny hanjo azy aorian'ny fiovàna goavana ara-politika.
Nozarain'ny mpitarika ny mpanohitra Rosiana, Aleksey Navalny ,ihany koa ny rohy mombamomba an'i Kossiev ao amin'ny Vkontakte, ahitàna ny sariny vitsivitsy amin'ny toe-javatra ara-dalàna – miala sasatra sy miaraka amin'ny fianakaviany eny amoron-dranomasina – natao nifanila tamin'ny fitantaran'i Dadin ny baiko nomen'i Kossiev hampijaliana ny voafonja.
А вот вконтакт палача Коссиева https://t.co/0QwRqqHCjP  pic.twitter.com/gQJxnVNlz3 
— Alexey Navalny (@navalny) November 1, 2016 
Inty ny pejy Vkontakte an'ilay mpampijaly Kossiev.
Naparitak'i Zdolnikov ny fampahafantarana ny fianakavian'i Kossiev, ahitàna ny vadiny sy ny zanany, ary nasehony ny pejin'ny haino aman-jery sosialin'izy ireo. Nantsoiny ireo mpanaraka azy mba hifandray amin-dry zareo ary hanoratra fa ” tsy vanona” i Kossiev.
@nemtsovmost  конечно считаю. Писать родне о том, что их муж или отец — ублюдок — это хорошо и правильно.
[Ho valin'ny fanontaniana : ” Moa ve ianao mihevitra fa mendrika noho ilay mpampijaly ?” ] MAzava ho azy, heveriko fa mendrika noho izy aho. Soraty amin'ny olona akaiky azy fa tsy vanona ny vadiny na ny rainy. Izany no zavatra mendrika tokony hatao.
Niresaka tamin'i Vladislav Zdolnikov i Aric Toler avy amin'ny RuNet Echo sady nanontany azy ny amin'izay tiany hatao amin'ny fanaparitahana ny fiainan'i Sergey Kossiev manokana.
RuNet Echo: Nahoana ianao no nanapa-kevitra hampifantoka ny olona amin'ny momba an'i Kossiev sy ny fianakaviany amin'ny haino aman-jery sosialy ?
Vladislav Zdolnikov: Rehefa ny herisetra faobe atao amin'ireo voafonja izay mazava fa nokarakarain'ny fitantanana ny toby famaizana no resahanay, dia ny fanapariahana araka izay azo atao ilay zava-nitranga no fomba iray amin'ireo vitsivitsy mba hitarihana ho amin'ny fiovàna.
Heveriko fa zava-dehibe ny mitondra ireo vaovao ireo ho hitan'ireo olona akaiky ireo mpitantana izay manatanteraka heloka bevava, isan'izany ny namany sy ny fianakaviany. Tokony ho fantatry ry zareo izay ataon'ity olona ity, iza no iarahany miaina sy ifaneraserany.
Noho izany, adikanay izay zava-niseho avy any amin'ny tontolon'ny asa mankany amin'ny tontolo manokana. Azoko antoka fa tsy hiteny hoe : ” nampijaly voafonja aho androany, nahantoko tamin'ny rojo vy izy” [ny mpitantana ny fonja] rehefa tonga any an-trano. Tsy hiteny amin'ny vadiny hoe ” nandrahona ny hanolana gadra aho androany,” satria fantany fa tsy ho takatry ny vadiny ny antony.
Heveriko fa tokony hisy vokany tsara amin'ny toerana misy an'i Dadin izany tsindry ara-tsaina izany.
Hazavaiko kosa fa tsy nihevitra ny fianakaviany ho tompon'andraikitra na hijaly noho ny asany aho. Tsy mbola nangataka tamin'izy ireo ny ho “voapoizina” tamin'izany fanazavana izany mihitsy aho na iharan'ny lafy ratsiny amin'ny fomba hafa.
RuNet Echo: Nampahatsiahy ahy ny “Banality of Evil ” (Ny fahatsoran'ny ratsy ) ny famakiana ny bitsika nataonao sy ny fijerena ny pejin'ny haino aman-jery sosialin'i Kossiev, mifanila amin'ny taratasin'i Dadin. Inona no vokany amin'ny sarambaben'ny Rosiana, amin'ny hevitry ny olona, ary mety hiova ve ny zava-misy ao amin'ny Toby famaizana amin'izany fampitahana izany ?
Vladislav Zdolnikov: Inoako fa tsy maintsy misy fiantraikany amin'ny fifandraisana amin'io olona io izany. Fantatry ny olona fa mety hitsilailay eo akaikiny any amoron-dranomasina io mpampijaly olona any am-piasàny io. Mampieritreritra izany fara-faharatsiny.
Omen'ny haino aman-jery sosialy fahafahana mihetsika isika amin'ny toe-javatra izay toa tsy ahafantsika manao na inona na inona. Tsy manam-panantenana hanamarina izay avoakan'ny biraon'ny mpampanoa lalàna, izay manafaka na manasazy ireo voampanga isika. Rehefa mahatsapa fiaraha-mizaka ny mafy amin'izay zava-mitranga, rehefa mitebiteby ianao, dia mampisaina anao ny amin'izay azonao atao mba hanampiana olona iray izany. Fantatro loatra i Dadin, ary tena manahy ny amin'ilay taratasy nosoratany aho. Noho izany dia mila mamorona zavatra aho ary izao hetsika izao no vokany. Tsy fantatro izay fomba tsara kokoa hilazàna izany.
RuNet Echo: Ant Andrefana, fantatray ny momba ny toby famaizana Sovietika noho ny haisoratra tamin'izany fotoana izany. Amin'izao fotoana izao, tsy mahafantatra loatra ny any izahay ankoatra izay hitanay tamin'ny raharaha Pussy Riot. Inona no ho lazainao amin'ny vahoaka tandrefana ny amin'ny zava-misy momba ny tobin'ny fonja Rosiana moderina amin'izao fotoana izao, ary inona no fantsona hahafahanay (any andrefana) mahalala bebe kokoa ny momba azy ireo ?
Vladislav Zdolnikov: Iray amin'ireo efa tena mahazatra amin'ny ankamaroan'ny fonja Rosiana ny toe-draharaha fantatray tamin'ny taratasin'i Dadin. Tsy entina tahaka ny olona ireo voafonja, ary atao izay hampatahotra azy mandrakariva, mba hamoretana sy hanafoanana ny finiavany.
Niaraka tamin'i Ildar Dadin ihany no nahafantaranay ny zava-misy noho izy sy ny vadiny manana ny toerany ao amin'ny tontolon'ny mpanohitra. Nanampy tamin'ny fampielezana haingana ny lahatsoratra avy ao anatin'ny taratasiny izany.
Tantara an-jatony mitovy amin'ny an'i Ildar no hita amin'ny fikarohana malaky amin'ny Google. Inty,  ohatra, taratasinà gadra iray voatàna tao amin'io toby famaizana io tamin'ny 2012. Mitovy tsy misy valaka amin'ny fampijaliana voasoratra ao amin'ny taratasin'i Ildar ny fampijaliana voatantara ao.
Tsy ampy 24 ora akory taorian'ny nanaparitahan'ny Meduza ny taratasin'i Dadin, dia toa efa misy fiantraikany sahady  ilay hetsika. Nivory teo ivelan'ny biraon'ny Sampan-draharahan'ny Fonja Federalin'i Maosko ireo mpikatroka mafana fo sy ireo mpitolona mba hanao hetsika ho fanohanana an'i Dadin sy ho fanavaozana ny fonja.
Акция против пыток над Эльдаром Дадиным рядом со зданием ФСИН pic.twitter.com/p0PnlBVgnL 
— король тушканчиков (@Romenskiy) November 1, 2016 
Fihetsiketsehana ho fanoherana ny fampijaliana an'i Ildar Dadin eo akaikin'ny tranon'ny Sampan-draharahan'ny Fonja Federaly.
Nasehon'ny fahitalavitra Rosiana REN TV ihany koa ny sarin'i  Dadin izay voalaza fa nalaina ny marainan'ny androtr'io, tsy ahitàna dian-kapoka na marika fampijaliana. Nohamafisin'ny vadin'i Dadin, Anastasia Zotova, fa naratra ny vadiny tamin'ny tapaky ny volana Septambra, fa efa nikatona ny fery amin'izao fotoana izao.
Nampanantena  ny mpiasan'ny Fonja Federaly fa avelany hijery ny voafonja ireo ” mpitsabo manam-pahaizana tsy miankina”, mba hanamafisana ny filazan'ny governemanta fa tsy nampijaliana ara-batana tsy ara-drariny izy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/11/02/91221/
 famerenana ny fanitsakitsahana ny fitsipiky ny fivoriam-bahoaka”: http://www.rferl.org/a/russia-activist-claims-torture-threats-in-prison-letter/28088864.html
 nozarain'ny : https://meduza.io/en/feature/2016/11/01/10-12-people-would-beat-me-all-at-once-kicking-me
 tangoronosy GULAG : https://www.amazon.com/dp/B001RNNRF4/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1
 tantaran'ny Kolyma an'i : https://www.amazon.com/dp/B003AYZBQG/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1
 Misosa ny Zava-drehetra an'i: https://www.amazon.com/dp/B003K15IE4/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1
 Major Kossiev: https://archive.is/JEw4Z
 November 1, 2016: https://twitter.com/unkn0wnerror/status/793374958655246336
 November 1, 2016: https://twitter.com/navalny/status/793375186561167360
 November 1, 2016: https://twitter.com/unkn0wnerror/status/793406434331557888
 “Banality of Evil ” (Ny fahatsoran'ny ratsy ) : https://en.wikipedia.org/wiki/Eichmann_in_Jerusalem
 toa efa misy fiantraikany sahady: https://meduza.io/news/2016/11/01/u-zdaniya-fsin-v-moskve-ustroili-piket-protiv-pytok-v-koloniyah
 November 1, 2016: https://twitter.com/Romenskiy/status/793456985551298560